Tajikistàna: Firenena Mahantra Manana Fitsaràna Lafo Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2018 5:55 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka amin'ny May 2008)
Firenena mahantra indrindra ao Azia Afovoany, nanomboka ny fitsaràna faran'izay tena lafo indrindra tao anatin'ny tantaran'ireo raharaham-pitsaràna Britanika i Tajikistàna. Handoa vola 120 tapitrisa dolara mikasika ireo haba ara-dalàna i Tajikistàna, izay manome ny 5,2% amin'ny Harin-karena Faoben'ny firenena. Ny Orinasa Tajik Aluminum (Talco) no tena taolana mampifanolana, izay an'ny fanjakana manontolo. Ampangain'ny andaniny Tajik ho manao hosoka ireo mpîara-miasa aminy.
Tany aloha tany dia nampifandraisin'ny Registan tamin'ny lahatsoratr'i John Helmer mikasika an'io fitsaràna io
Miketrika ny hanao fitsaràna amin'ity taona ity ho fitakiana vola ny Fitsaràna Avo ao Londra, tombanana ho hatrany amin'ny 500 tapitrisa dolara Amerikana isantaona, tsy hita tao amin'ny orinasa Tajikistan Aluminium Plant (TadAz, Talco), izay ny Hydro Aluminium no tena mpiara-miasa ara-barotra, orinasa ambany fanarahamason'ny fitondràna Norveziàna, mpamokatra viraty.
Avy eo, nanohy ny teniny i Joshua Foust ary nitsikera an'io.
Amin'ny ankapobeny, vola anjatony tapitrisa dolara maro no tsy hita, mety ho nafindra toerana tamin'ny alàlan'ireo orinasa any Karaiba, dia mifampitoritory eo ny rehetra mba hahalalana izay tena nitranga.
Mifandray amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Asia Times i Ian ao amin'ny Beyond the River
Voatery naborak'i Herbert Smith, iray amin'ireo kabinetranà mpisolovava Britanika goavana indrindra, tamin'ity volana ity teo amin'ny Fitsaràna Avo tao Londra, fa tsy maintsy nitaky vola 100 tapitrisa dolara mahery tamin'ny governemanta Tajikistàna izy noho ny raharaham-pitsaràna naharitra telo taona nampanaovin'ny Filoha Tajik, Imomali Rakhmonov (Rahmon). Vondrona iray ahitàna ireo mpandraharaha sy mpitantana amin'ny viraty, izay monina ao Londra ankehitriny, no lasibatr”i Rahmon, ireo izay noroahana avy ao amin'ny Tajikistan Aluminum Plant (TadAZ, Talco) taorian'ny nanakaikezany akaiky loatra ny tombontsoan'ny filoha tao amin'ilay indostria fototra tao Tajikistàna.
Araka ny voalazan'i Ian,
Ireo rehetra ireo dia misy fifandraisany betsaka amin'ny a) loharanon-karena voajanahary ao Tajikistàna, ny viraty, ary b) ny fifanarahana misy eo amin'i RusAL, ny orinasa Rosiana mpamokatra viraty, ary ny governemanta Tajik mba hanorina orinasa vaovao mpamokatra viraty sy ny famitàna ny Tohodrano Famokarana Herinaratra ao Rogun. Ilay tohodrano izay ankehitriny angatahan'ny governemanta Tajik vola fanampiana avy amin'ny tsy miankina.
Raha ny marina, mampivanàka an'izao tontolo izao io fitsaràna io noho ny fahitàna ny tontalin'ireo saran'ny fitsaràna sy ny fampitahana ny Harinkarena Faobe ao Tajikistàna. Mihoatra avo folo heny amin'izay kasain'ny ben'ny tanàna Dushanbe ho angonina avy amin'ireo mponina ao andrenivohitr'i Tajik mba hanamboarana ny tohodranon'i Rogun, izay mety hahavatsy herinaratra ampy ho an'i Tajikistàna.
Manontany tena [tj] i Tojvar ny amin'izay toerana fiaviana hakàn'ireo mpiasam-panjakantsika an'io vola io:
Sahala amin'ny hoe tsy maintsy ho vonoinay avokoa ireo soavalinay, ireo ombivavinay ary ireo ondrinay mba hanangonana vola, izay tsy hahasehaka ny antsasak'ireo sarany akory. Sahala amin'ny hoe tsy maintsy ho rasainay avokoa ireo soavalinay, ireo ombivavinany ary ireo ondrinay mba hanangonana vola, izay tsy hahasehaka ny antsasak'ireo sarany akory. Amin'izao fotoana izao, manontany tena aho hoe tonga hatraiza ny tsy fananana henatra ao amin'ireo mpiasam-panjakana ireo ka [handanian-dry zareo vola be loatra aminà saran'ny fitsaràna] sy hangaronan'izy ireo ny poketran'ireo vahoaka mahantra mba hahazoana vola ho an'ny fanamboarana ny tohodranon'i Rogun. Inona no tokony ataon'ireo vahoaka mahantra?
Mety ho loharanom-bola hanatevenana ny toebola ny viraty ao Tajikistàna sy hanafahana ny firenena ao anatin'ny krizy henjana ara-toekarena. Tamin'ny taona lasa, nanao tatitra mikasika ireo tombontsoa azony ny Talco, ary tena goavana izany. Kanefa, mieritreritra i Central Asia fa ho hakelezin'ny kolikoly ilay tombontsoa, izay tsy hitondra fahasamihafàna akory eo amin'ny firenena.
Mahafaly ny mandre fa manana entana izay afaka mamatsy ny fampandrosoana matotra ny firenena i Tajikistàna, saingy indrisy, ny kolikoly sy ireo fifanarahana novàna dia mamadika an'io omby vavy mpamatsy ronono io ho lasa sakafo voavoatra. Manohy tsy manaraka ny lalàna momba ireo trosa sy ireo fifanarahana hatrany ny Talco, ary miangavy ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena i Tajikistàna mba handefitra amin'ireo trosa – miaraka amina vola miditra isantaona 1,2 lavitrisa dolara, sarotra ny mahita hoe nahoana no tsy ho afaka handoa vola ny Talco.
Manana loharanon-karena ampy i Tajikistàna, saingy ny kolikoly lalim-pàka no mahatonga ny vola azo amin'ireny loharanon-karena ireny tsy mameno afatsy ny paosin'ireo olona vitsivitsy. Raha afaka nampiasa tamin'ny fomba voalanjalanja ireo loharanon-karentsika isika, efa afaka nataontsika ny nanorina indray mandeha ny Sangtuda-1, 2, Rogun ary ireo tetikasan'angovo hafa iankinan'ny aina sy tena ilaina, izay tokony hanampy antsika hanana famatsiana herinaratra sy famanana mahaleotena.
Farany, manao famintinana tsara iray mikasika io fitsaràna io i Ian ao amin'ny Beyond the River ary mitatitra ny famonoana ny iray tamin'ireo olona maro voasingotra tamin'io fitsaràna io.
Nalefa ihany koa tamin'ny neweurasia.